တရုတ် 8Panel ဥရောပအဆင့်မီခေါက်နိုင်သောသစ်သားကလေး Playpen စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ။ Faye
8Panel ဥရောပ Standard ခေါက်နိုင်သောသစ်သားကလေး Playpen
ထုပ်နိုင်သောအစိုင်အခဲသစ်သားကလေး Highchair စားသောက်ဆိုင်
Big Wheels နှင့်အတူဟိုတယ်တွင်ခေါက်သိမ်းနိုင်သောကလေးခေါက်ကလေး
ဖက်ရှင် Baby Frame Bed House အိပ်ယာခင်း
120x60cm ဥရောပစံ 2in1 အစိုင်အခဲသစ်သားကလေးခေါက်ခုတင်
အီးယူ Standard ကလေးအိမ်ကုတင် Frame Baby ခေါက်
● 8 Side PLAYPEN - သင့်ကလေးများနှင့်မြေးများကိုစောင့်ကြည့်နေသည့်အုပ်ထိန်းသူကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအကာအကွယ်ပေးသည်။ ထို့အပြင်၎င်းကိုကုသမှုမရှိသောအစိုင်အခဲထင်းရှူးသစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
●အစဉ်အမြဲဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိခြင်း - Playpenpen တွင်ကြမ်းပြင်များနှင့် playpen ၏ရွှေ့ပြောင်းခြင်းမှကာကွယ်ရန်ရော်ဘာအခြေအနေတစ်ခုရှိသည်။ တံခါးသည်သက်သောင့်သက်သာရှိသောဝင်ပေါက်ကိုခွင့်ပြုသည်။
●တီထွင်ဆန်းသစ်သောနည်းပညာ - အခြားပြဇာတ်များနှင့်မတူသည်မှာ၎င်းကိုတီထွင်ဆန်းသစ်သောဖိအားပေးမှုယန္တရားမှတဆင့်ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်သော့ခတ်ထားနိုင်သည်။
●လွယ်ကူပြီးအချိန်ကုန်သက်သာစွာစုစည်းခြင်း - Playpen ကိုချိတ်ဆက်ရန်သင်နှင့်နောက်ဆုံး element ကို screw နှစ်ခု (screws နှစ်ခု) ဖြင့်ချိတ်ဆက်ရန်အတွက်ဝက်အူလှည့်လိုအပ်သည်။ ကျန် playpen ၏ကျန်မိတ်ဆက်ပေးသည်။
●အသုံးမ ၀ င်နိုင်သည့်ချဲ့ထွင်နိုင်မှု - အပိုထပ်ဆောင်းပါ ၀ င်သည့်အပို ၀ ယ်ယူမှုများအားဖြင့်သင်သည်အ ၀ န်းကိုအလိုအလျောက်တိုးချဲ့နိုင်သည်။
လုံခြုံမှု - ကုသမှုမရှိသောထင်းရှူးသစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်း - ဒြပ်စင်၏မျက်နှာပြင်အားလုံးသည်ဒဏ်ရာများကိုကာကွယ်ရန်ချွန်ထက်သောအနားများမရှိခြင်း - ထူသောဘားများ - အချင်း ၁.၅ စင်တီမီတာ - ဘားများအကြားအကွာအဝေး - ၆.၅ စင်တီမီတာ - အမျိုးမျိုးသောပုံစံများဖြင့်သော့ခတ်နိုင် ကလေးတစ် ဦး အားရွှေ့ပြောင်းခြင်းသည် - DIN EN 12227 (အိမ်သုံးအတွက် Playpens) DIN EN 1930 (ကလေးအသုံးပြုမှုနှင့်ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဆောင်းပါးများ - ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတားအဆီးများ) - အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတားအဆီးများ - DIN EN 71 (ကစားစရာများ၏အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး) DIN EN 71 - အရဂျာမနီ၏လုံခြုံမှုစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ၁ (စက်မှုနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ) DIN EN-71-2 (လောင်ကျွမ်းနိုင်သော) DIN EN-71-3 (အချို့သောဒြပ်စင်များရွှေ့ပြောင်းခြင်း)
ကုန်ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက်များ - ဒြပ်စင်တိုင်းကို ၂၇၀ ဒီဂရီထောင့်ဖြင့်ရွေ့လျားနိုင်သည်။ ကြံ့ခိုင်ပြီးလေးလံသောပုံစံ၊ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်သင်လိုချင်သောမည်သည့်ပုံသဏ္createာန်ကိုမဆိုဖန်တီးနိုင်သည်။ ၁၆ ကီလိုဂရမ် - ရော်ဘာအောက်ခြေအဖုံးများ - ဂိတ်တံခါးကိုနှစ်ဖက်စလုံးမှလုံခြုံသောကလစ်မှတစ်ဆင့်ဖွင့်နိုင်ပြီးတံခါးပိတ်ထားနိုင်သည်။ လုံးဝနီးကပ်စွာတပ်ဆင်ထားသည်။ ပထမနှင့်နောက်ဆုံးဒြပ်စင်နှစ်ခုအား screw နှစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်သည်။ playpens ပိုပြီးအစုံ၏ဝယ်ယူ
DIMENSIONS - စုစုပေါင်းအ ၀ န်း ၇.၂ မီတာ - အမြင့်: ၇၀. ၀ စင်တီမီတာ - ဒြပ်စင်တစ်ခု၏အတိုင်းအတာခန့်။ 70.0စင်တီမီတာ x ကို 90.0စင်တီမီတာ - တံခါး၏အတိုင်းအတာ: ခန့်။ အကျယ် 50. ၀၀ စင်တီမီတာအမြင့်နှင့် ၆၅.၀ စင်တီမီတာအမြင့် - ခေါက်ထားသည့်ကစားကွင်း - ၉၀.၀၀ စင်တီမီတာ x ၇၀-၀၀ စင်တီမီတာမှ ၂၀- ၅ စင်တီမီတာ
ရှေ့သို့ ခရီးဆောင်အခန်း Divider ကလေးကလေးတွေ Barrier Playpen တံခါးနှင့်အတူ
နောက်တစ်ခု: ခေါက်သိမ်းနိုင်သောအိတ်ဆောင်အခန်း Divider ကလေးကလေးတွေ Barrier ကလေးကစားကွင်း
ကလေး Playpen ခေါက်
ခေါက်သိမ်းနိုင်သောအိတ်ဆောင်အခန်းခလေးကလေး Barri ...
အိတ်ဆောင်အခန်း Divider ကလေးကလေးတွေ Barrier Plaype ...